चित्रकारी, ग्राफिक्स | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: चित्रकारी, ग्राफिक्स
मलाई बोरिस वेलेजियोका चित्रहरू मनपर्छ। कुन कुन कामका सबै भन्दा राम्रो विचार गर्न सकिन्छ? उनको जीवनीको बारेमा के उल्लेखनीय छ?
मलाई बोरिस भलेगिओको चित्रहरू मनपर्‍यो। उसको कुन काम सबैभन्दा राम्रो मान्न सकिन्छ? उसको जीवनीको बारेमा के उल्लेखनीय छ? बोरिस भेलेजो लिमा, पेरूमा जन्मेका थिए जहाँ उनका बुबा सफल वकील थिए।
पोर्टेट्रिसस्टिस्ट र ल्यान्डस्केप प्यानरहरू 19 सदीको बताउँछन्
१ Jose औं शताब्दीका चित्रकार र ल्यान्डस्केप चित्रकारहरू १-जोस मारिया भेलास्को १19०-१-1१1840 ल्यान्डस्केप चित्रकार भन्छन्- मेक्सिकन मास्टरपीस २ एलेक्सी टायरानोभ १1912०2-१-1808--पोर्ट्रेट पेंटर--आइज्याक लेभियान १1859०-१3००-मास्टर परिदृश्य ter-भ्यालेन्टीन सेरोभ -१1840-1900-१-4१११ - चित्र चित्रकार 1865-- वसिली पेट्रोविच भेरेस्चेगन -१ 1911-5-१1835०1905 पोर्ट्रेट र चित्रकार--वसिली ...
भ्यान गगको चित्रकारीमा "कागहरूसहितको गहुँ क्षेत्र" के बोक्दछ? मलाई चित्रकलाको बारेमा धेरै थाहा छैन, तर किन यो सब भन्दा महँगो हो
भ्यान गोगको चित्रकारीमा "कागहरूसहितको गहुँ क्षेत्र" के बोक्दछ? मलाई चित्रकलाको बारेमा धेरै थाहा छैन, तर किन यो युक्रेनको महँगो भेषमा परेको झण्डा हो! अन्तिम र एक ...
रूसी कलाकारहरू? सायद सबैभन्दा प्रसिद्ध! कृपया रूसी कलाकारहरू लेख्नुहोस्, राम्रो, तिनीहरूको नाम थर हो !!!
रूसी कलाकारहरू? सायद सबैभन्दा प्रसिद्ध! कृपया रूसी कलाकारहरूलाई लेख्नुहोस्, राम्रो, तिनीहरूको नाम थर हो !!! १ th औं शताब्दीका रूसी कलाकारहरू http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html महान कलाकार ...
तपाईं कसरी टिम पेपर र कसरी गर्न सक्नुहुन्छ?
कसरी र कुनसँग तपाईं समान रूपमा टिन्ट पेपर गर्न सक्नुहुन्छ? सबै भन्दा राम्रो स्पन्जको साथ, यदि कागज ठूलो छैन भने, यो सजिलो र राम्रो र छिटो हुन्छ !!! :-)) कागजको टोनिंग कुनै निश्चित टोनको पेन्टको चयनको साथ सुरु हुन्छ।
त्रित्यकोभ ग्यालेरी कति छन् र के छ
ट्रेत्याकोभ ग्यालेरीमा कतिवटा हलहरू छन् र जुन ट्रेटीकोभ ग्यालरीमा १०106 हलहरू छन्? ग्यालरीको स painting्ग्रह चित्रकला, ग्राफिक्स, आइकन चित्रकला र मूर्तिकलामा विभाजित छ। Rooms२ कोठामा अवस्थित लावरुन्स्की लेनमा प्रदर्शन गरिएको थियो ...
रूसी प्रभावशाली कलाकारहरू?
रूसी प्रभाववादी चित्रकारहरू? साँच्चै, सायद, केवल Kovovin। हुनसक्छ बोरिसोभ-मुसाटोभ, लान्स्रे। पेट्रोभस्की-राकिन्टन रूसी प्रभाववाद १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धका रूसी चित्रकारहरूको कामका लागि पारंपरिक नाम हो। , जसमा रचनात्मकताको प्रभाव ...
फ्रान्सिस्को गोया द्वारा लेखिएको "मे,, १3०1808 को रात विद्रोहीहरूको शूटिंग" को चित्रण वर्णन गर्नुहोस्
"मे 3, १ 1808०2 को रात विद्रोहीहरूको गोलीबारीको" चित्र बनाउनुहोस् "फ्रान्सिस्को गोया आआए मे २, १ 1808०XNUMX मा स्पेन कब्जा गर्ने फ्रान्सेली सेनाले म्याड्रिडमा देशभक्ति विद्रोहलाई निर्ममतासाथ दबाए। तुरून्त ...
संगीत चित्रकारी के हो?
सांगीतिक पेन्टि is के हो? एटीपी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसको लोकप्रियताको बावजुद - रेडियो, टेलिभिजन, थिएटरमा हरेक दिन संगीत सुन्न सकिन्छ - यो सामान्यतया स्वीकार गरिन्छ कि यो अदृश्य, अमूर्त, अल्पकालीन छ। हामी ...
पाम ट्याटुको अर्थ के हो? म मेरो औंलामा यस्तो ट्याटू पाउन चाहन्छु, मेरो लागि यो धेरै नै हो ...
पाम ट्याटुको अर्थ के हो? म मेरो औंलामा त्यस्तो ट्याटू प्राप्त गर्न चाहन्छु, मेरो लागि यो धेरै नै हो ... पाम ट्याटूको विदेशी रूखको विदेशी मूल्यहरू विदेशी रूखले विजय, महिमा, रमाईलोको प्रतीकको कारण ...
ज्यास्पर .. सार्डिस .. Smagd - यी पत्थरहरू के हो? कुन रंग? त्यसको मतलब के हो?
ज्यास्पर .. सार्डिस .. Smagd - यी पत्थरहरू के हो? कुन रंग? त्यसको मतलब के हो? जेस्पर (ज्यास्पर) रत्न। तुला, कन्या, मिथुन राशिको संकेतका लागि उपयुक्त। सेडिमेन्टरी सिलिसियस चट्टान, विविधतापूर्ण ढु stone्गा, एगेट र ... बाट भिन्न
एले अल्फोन्स भिभ्ने ग्यालरीमा प्रदर्शन गरिएको “रातको बत्तीमा गुफामा नेग्रोहरूको लडाई” यो चित्रकला के हो?
एले अल्फोन्स भिभ्ने ग्यालरीमा प्रदर्शन गरिएको “रातको बत्तीमा गुफामा नेग्रोहरूको लडाई” यो चित्रकला के हो? यो पहिले नै पूरै स्कूल हो, वा नयाँ राम्रोसँग पुरानो बिर्सिएको छ। फ्रान्सेली ठट्टा गरे, र मालेविच रंगे ...
र gouache संग एक फेरोको रंग कसरी बनाउने?
कसरी गोचेको साथ फेरोइज रंग बनाउन? हरियो, निलो, सेतो ... मिक्स .. फ़िरोज़ा हुनेछ .. मैले यो गरें। प्रयोग गर्नुहोस् र तपाइँ नीलोमा अलि पहेलो हुनुहुनेछ…। हुनसक्छ अलि बढी ...
थ्रो, कृपया, मa्गा "बिरालो स्वर्ग" को लिंक, त्यहाँ भेनिला र चोकला पनि छ, अग्रिम धन्यवाद।
थ्रो, कृपया, मa्गा "बिरालो स्वर्ग" को लिंक, त्यहाँ भेनिला र चोकला पनि छ, अग्रिम धन्यवाद। मलाई चोकला मन पर्छ। प्रश्न खण्ड उस्तै छैन। भानिलिन र चकोलिन, वा केहि))) http://animult.net/mangas/cat-para स्वर्ग मंगा Gakuen Sousei ...
बैंगनी र बैंगनी यी रंग हुन्?
बैजनी र बैजनी, यी रंगहरू के हुन्? तिमि के हौ? यी बिभिन्न रंगहरू हुन्! बैजनी लिलाक जस्तो हो। तर बैजनी र फिकर एकै रंगका विभिन्न शेडहरू हुन् (गुलाबी)
यो सडक कला भनेको के हो?
यस प्रकारको सडक कला को नाम के हो? ... सडक कला, वा भित्तिचित्र तोडफोड :) Graffiti, Banks द्वारा समान शैलीमा चित्रित। Graffiti Graffiti - पेशेवरहरु द्वारा गरिन्छ। तपाईंको घरबाट भित्ताहरू वा भित्ताचित्रहरूमा चित्रहरू ...
चित्रण "रोईरहेको केटा" तपाईलाई के थाहा छ
चित्रण "रोईरहेको केटा" तपाईलाई के थाहा छ? १ 1985 XNUMX को बीचमा, आगो वरिपरिका कथाहरू र रहस्यमय रूपमा यसमा जीवित रह्यो ...
चित्र र कविताहरू। कृपया मलाई भन्नुहोस्, पोर्ट र कविताको संयोजन! शीर्षक र लेखक
चित्र र कविता। कृपया मलाई पोर्ट्रेट र कविताको संयोजन बताउनुहोस्! शीर्षक र लेखक ए। पुष्किन "Zhukovsky को चित्र को लागी" म न त बुढो छ न जवान, र शायद सबै ध्यान दिएर छैन, म समात्न ...
के रंग रातो - पहेलो वा रातो छ?
के रंग रातो - पहेलो वा रातो छ? रातो Chervony - रातो। रातो तामाको रंग बरु रातो पहेलो भन्दा रातो रातो tinge chervonny साथ: १) th, th। १. पुरानो। रातो, रातो
एक्लै आफ्नो होंठ मा मोनेट लिइस लियोनार्डो दा विन्सीले कति वर्ष गरे?
कति वर्ष लियोनार्डो दा भिन्चीले मोना लिसाको ओठहरू मात्र रंग्यो? के लियोनार्डो जात छ? कथा यस बारेमा मौन छ। उपाख्यान: लियोनार्डो दा भिन्चीले लगभग १२ बर्षमा painting ओटा पेन्टि spentमा बिताए “मोना ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,183 प्रश्नहरू।